श्रीलङ्का आक्रमण: अरू कुनकुन देशमा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रतिबन्धित छ? - Sabal Post
श्रीलङ्का आक्रमण: अरू कुनकुन देशमा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रतिबन्धित छ?
बीबीसी – श्रीलङ्कामा इस्टर पर्वका दिन भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणपश्चात् सार्वजनिक स्थलमा अनुहार छोप्ने पहिरन लगाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ। ‘पहिचान छोपिने’ किसिमका कुनै पनि पहिरन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रतिबन्धित गर्न लागिएको राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यालयले जनायो। प्रतिबन्धको समर्थन गर्नेहरूले त्यस्तो कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ पार्न तथा जातीय अनि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेट्न आवश्यक भएको बताउँछन्। तर अधिकारवादी समूहहरू भन्छन् – यो निर्णयले मुसलमान महिलाविरुद्ध भेदभाव हुनेछ किनकि यस्ता पहिरनलाई धार्मिक दायित्व ठानिन्छ। श्रीलङ्कामा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रतिबन्धित श्रीलङ्का आक्रमणको आरोप लागेको ‘जिहादी’ न्याश्नल तौहिद जमात के हो
अन्यत्र कहाँकहाँ यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको छ?
युरोप फ्रान्स युरोपको पहिलो देश थियो जसले सन् २०११ मा पूर्णरूपमा अनुहार ढाक्ने मुस्लिम पहिरनलाई प्रतिबन्धित गरिदियो। उक्त प्रतिबन्धलाई सन् २०१४ मा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले अनुमोदन गरेको थियो। डेनमार्कमा सन् २०१८ को अगस्टमा अनुहार पूरै छोपिने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विरोध प्रदर्शनहरू भए। त्यहाँको कानुनमा यदि ‘कसैले अनुहार नदेखिने गरी सार्वजनिक स्थलमा पोसाक लगाए’ उनीहरूमाथि एक हजार क्रोनको जरिबाना लगाइने र वारंवार गल्ती गरे १० गुना धेरै जरिबाना लगाइने उल्लेख छ। नेदरल्यान्ड्सको सिनेटले सन् २०१८ को जुनमा एउटा कानुन अनुमोदन गर्‍यो जसले विद्यालय र अस्पतालजस्ता सार्वजनिक भवन अनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनुहार ढाक्ने पहिरन प्रतिबन्धित गर्‍यो। तर सार्वजनिक सडकमा भने उक्त नियम लागु हुँदैन।
जर्मनीमा सवारीसाधन चलाउँदा अनुहार ढाक्न पाइँदैन। जर्मनीको संसद्को तल्लो सदनले त्यस्तै प्रतिबन्ध न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी तथा सैनिकको हकमा लगाउने कानुन पारित गरेको छ। पूरै मुहार छोप्ने पहिरन लगाएका महिलाले पहिचानको निम्ति त्यो खुला पार्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा अस्ट्रियाले अदालत र विद्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थलमा त्यस्ता पहिरन प्रतिबन्ध गरेको छ। सन् २०११ को जुलाईमा बेल्जियममा पनि त्यस्तै कानुन लागु भयो।
नर्वेमा सन् २०१८ को जुनमा शैक्षिक संस्थामा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित भयो। बुल्गेरियाको संसद्ले चाहिँ सन् २०१६ मा अनुहार छोप्ने पहिरन प्रयोग गर्ने महिलाहरूमाथि जरिबाना लगाउने र सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ। लक्जमबर्गमा अस्पताल अदालत तथा सार्वजनिक भवन जस्ता केही खास ठाउँमा निषेध गरिएको छ। केही युरोपेली देशहरूमा निश्चित सहर तथा क्षेत्रमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएका छन्। जसमध्ये इटली पनि हो जहाँ कैयौँ सहरमा अनुहार ढाक्ने पोशाक लगाउन पाइँदैन। स्पेनको बार्सिलोना सहरले सन् २०१० मै नगर कार्यालय, बजार तथा पुस्तकालयमा त्यस्तो पहिरन निषेध गरेको थियो। स्वीट्जरल्यान्डमा केही क्षेत्रमा अनुहार ढाक्ने पहिरन वर्जित छ।
अफ्रिका सन् २०१५ मा मुहार पूरै छोपिएका महिलाहरूबाट कैयौँ आत्मघाती विस्फोटन गराइएका घटनाहरू भएपछि चाड, गेबन, क्यामरुनको उत्तरी क्षेत्र, नीजेरको डिफा क्षेत्र तथा कङ्गो गणतन्त्रमा त्यस्ता पहिरन सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइयो। अल्जेरियामा सार्वजनिक सन् २०१८ को अक्टोबरदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थलमा पूरै अनुहार छोपिने पोसाक लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
चीन चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थलमा मुख छोप्ने पोसाक लगाउन तथा लामा दाह्री पाल्न निषेध गरिएको छ। सिन्जियाङमा उइगुर मुसलमान जनजातिको बसोबास छ। उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन्। सो क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप पनि भएका छन् जसको दोष सरकारले इस्लामवादी विद्रोहीमाथि लगाउने गर्छ।
धुर्मुस भन्छन्- बनावटी कुरा गरेको भए यही…
शुक्र ग्रह कुन राशिमा बस्दा प्रेम सम्बन्ध…
सुर्यनगर गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता २०७५को उपाधि ब्वाईज…